Izindatshana Zezilwane Zokudoba Nezokudoba "I-Titanic" - uFloridia
9:00 am - 13:00 pm / 16:00 pm - 20:30 pm
Izinto ezifunwa kuphela abangane bakho abanezinyawo ezine
Izihloko ngayinye Izilwane ezifuywayo futhi kusuka Ukudoba: yilezi eziphambili ukukhiqiza abaphathwa ngu "I-Titanic" a UFloridia, esifundazweni ISiracuse. Noma yiluphi uhlobo lwe ifolishi ngayinye izilwane yayo yonke iminyaka, imikhiqizo eyenzelwe cura futhi i inhlalakahle womngane wakho onezinyawo ezine futhi bukhoma isithiyo e zokwenziwa.
Imibhalo yezilwane ezifuywayo kanye nokuDoba: kusuka ku-Titanic kuya eSiracuse imikhiqizo esekhwalithi kuphela
Izihloko ngayinye Izilwane ezifuywayo futhi kusuka Ukudoba: iminyaka engu-25 Titanic a UFloridia, eSirakuse isebenza nge-360 ° ka cura, inhlalakahle ed inhlanzeko okwakho i-amici a ama-paws amane. Esitolo sethu esinezitolo ezinhle uzothola okungcono kakhulu kwemikhiqizo ephambili yemikhiqizo eyenzelwe impilo yakho isilwane, kodwa futhi bukhoma isithiyo o zokwenziwa for the ukudoba nendawo enikezelwe ukuzingela e ukuzilibazisa ngamanani amahle.
Izinsizakalo zokunakekela imidlwane yazo zonke izinhlobo nezinhlanzi zasemanzini
Il ithimba womsebenzi we Titanic unakekela izilwane kusuka ezinyangeni zokuqala zeminyaka futhi ikuvumela ukuba uzithenge zombili esitolo nakanjani amapulazi. Eqinisweni, ezinye izinhlobo zezilwane zingadluliselwa ngqo zisuka epulazini ziye ezindlini zazo ezintsha. Sibhekana izinja, amakati, izinyoni ezivamile, Izingulube zaseGuinea, izimfudu d'amanzi e komhlaba, namagundane, izirhubuluzi, ama-hamsters nakho konke okudingayo izindawo zasemanzini eu izinhlanzi. I-Titanic izosebenza kuzo zonke izici ze cura Kulezi imidlwane futhi bazokwazi ukululeka ukondla ed izimpahla ilungele zonke izinhlobo ze isilwane okuhlukile. Siphinde sibe yisikhungo esidumile se: i-aquarium, ukubuyisela emuva, ornithology nezinyoni.
Isitolo sezilwane ezifuywayo esinendatshana yokuzingela nokudoba kanye nokuphakelayo okuphuma kumikhiqizo emihle kakhulu
Kusukela ngo-1994 Titanic okunikezwayo esitolo sayo UFloridia, eSirakuse izinhlobo ezinhle kakhulu ze ukondla e izimpahla ngayinye izilwane ezifuywayo: I-Purina, I-Prolife, I-Royal Canin, Inja kaNatur nabanye abaningi bazotholakala esitolo sethu ngamanani atholakala kalula. Kusuka Titanic futhi ungasebenzisa ngokunenzuzo ekhoneni elizinikezelwe ukuzingela sibonga ebhentshini elihlinzekiwe nge imimese, izibhamu a salve e CO2 futhi ebulalayo futhi inembile I-Crossbows, yakhelwe ukukuqinisekisa ekuhambeni kokuzingela ngokuphepha okuphelele.
Ukujola - Inja yetekisi - I-Ornithology nakho konke ukuDoba
Titanic inikeza phakathi nezinsizakalo eziningi zezakho imidlwane ed ezifuywayo, futhi inembile futhi inembile isevisi di ukuzilolonga e ukuhlubula ngakunye uhlanga nobudala. Emagcekeni ethu iinhlanzeko womngani wakho we-furry uzoqinisekiswa ngokubonga kwabasebenzi abazolalela, abazosebenzisa kuphela imikhiqizo ethile ye ukuhlanza unolaka oluncane, ukukunikeza okungcono kakhulu okwakho isilwane. Futhi futhi: Inja yamatekisi, iqoqo lasekhaya nalo lonke usizo lwalabo abathanda izilwane bakusebenziseinkomba.
Ikheli: UViale Papa Paolo VI, 109
I-POSTAL CODE: 96019
Ucingo: 0931 944675
Umakhala ekhukhwini: 333 4581053
Umakhala ekhukhwini: 338 3098198
Inombolo ye-VAT: 01710340892